I-10 i-Anabolic Steroids Raw powder eyaziwa kakhulu nge-2019
Sonke singavuma ukuthi ukwakha umzimba kungenye yezindlela zakudala okuhloswe ngazo ukwenza ngcono ukubukeka komuntu, ikakhulukazi amadoda. Ngenkathi wonke umuntu eshaya indawo yokuzivocavoca ngomphumela ohlukile oyifisayo, i-denominator ejwayelekile ukuthi ngamunye ufuna ukubukeka engcono, ashise amafutha amaningi futhi angeze izicubu eziningi zomzimba. Kwabesifazane, ukubuyiselwa kokubukeka kwesifazane okuhehayo kungukulindlala okusemqoka ngemuva kokwakhiwa komzimba. Noma kunjalo, ukuze ufeze lokhu, kufanele ukhethe okuyikho Ama-Anabolic Steroids (AAS) ukufeza lokho okufunayo.
Sidale umhlahlandlela womthengi ugcwale ngamathiphu nezincomo zethu eziphezulu ukukusiza ukukhetha okuhle Anabolic Steroids (AAS) izinto zokusetshenziswa.
Ukuthengisa okushisayo I-Steroids Emanzini Materials Iningi Okudumile Okuhlanganisiwe I-Steroids Emanzini Materials Izinto ezihamba phambili ze-Oral Steroids Raw
I-Testosterone Enathate / Test E
Isilinganiselwa:★★★★★ I-Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren A
Isilinganiselwa:★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol / Dbol
Imikhiqizo enkulu kakhulu yokuthengisa ama-steroid evela kithi eminyakeni edlule
Ukuhweba okushibhile okulula kakhulu futhi okungabizi kakhulu kwama-steroid
I-Trenbolone Acetate inamandla kune-Trenbolone Enanthate ngenxa ye-Enanthate ester ethatha isisindo esiningi esikhungwini.
Iningi labasebenzisi elihamba kuqala nge-Trenbolone hormone njalo yiTrenbolone Acetate.
I-Dianabol ingazuzisa kakhulu ekwakheni iningi.
Imiphumela ye-Dianabol kulula ukubambelela kuyo uma isetshenzisiwe iyekiwe ngokuqhathaniswa nama-steroid.
Nazi Nazi I-10 ephezulu ye-Anabolic Steroids Raw:
Amagama Waziwa kakhulu we-Anabolic Steroid
Izinketho ezaziwa kakhulu ze-steroid yilezi:
Amagama E-Anabolic Steroid Ephumelela kakhulu
Ngokwesilinganiso somsebenzisi, ama-steroid asebenzayo kakhulu yilezi:
I-Trenbolone powder (umnqobi ocacile)
IHormone Yokukhula Komuntu (HGHraw)
Kunemibalo embalwa ebalulekile okufanele uyibheke lapho ukhetha i-Anabolic Steroids. Ungaqala ngokuqhathanisa izinhloso ezahlukahlukene ukuzikhethela ngokwakho.
Abantu bakhetha izinhlobo ezahlukahlukene ngezinhloso ezihlukile:
i-bulking steroids yokwakha izicubu zomzimba
ama-steroid okusebenza kwamandla nokukhuthazela
ukusika ama-steroid kwamafutha ashisayo
Ezinye izizathu zokusebenzisa zifaka ukuphulukisa nokululama kanye nokuthuthuka kwe-metabolism.
Ngezinhloso zombili zezokwelapha nezungekho emthethweni, i-AAS ingathathwa:
njengama-pellets afakwe ngaphansi kwesikhumba
esikhunjeni njengokhilimu noma ijeli
Izinhlobo zomlomo zithathwa ngomlomo. Kubandakanya:
I-Mesterolone (Proviron powder)
Amafomu angafakwanga afaka:
Boldenone undecylenate impahla eluhlaza (Equipoise)
Qhathanisa ama-Anabolic Steroids athandwayo kakhulu kwi-2019
Igama Product I-Teststeorne Enanthate powder Dianabol powder I-Trenbolone i-Acetate powder I-Anavar (Oxandrolone) i-powder I-stanozolol powder Ukukhula KweHormone Yabantu eluhlaza I-Nandrolone Decanoate powder I-Boldenone Undecylenate eluhlaza I-Drostanolone Propionate powder I-Methenolone Enanthate powder
Okuqhamuka uma udla imishanguzo ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆ ◆
Ukubuyekezwa kwethu kwe-10 kwe-Anabolic Steroids
I-Testosterone yi-anabolic steroid eyinhloko eyakhiqizwa ngumzimba wakho ngokwemvelo. Manje ngenkathi le-steroid ngokusobala isiza ekwakheni izicubu zomzimba wesilisa namandla ongase ube nawo, ibhekele nezinye izici zobudoda ezinjengezwi lakho elijulile nezinwele zobuso. Lapho isetshenziswa njengomuthi owandisa amandla ukusebenza, i-Testosterone izosiza ukwanda ngosayizi namandla emisipha yakho, inciphise ukulimala kwemisipha, futhi ikhuphule ukuvuselelwa kwemisipha.
I-Trenbolone ibhekwa kabanzi njengenye yama-anabolic steroid aqine kakhulu owake wenziwa. Eqinisweni, inamandla amahlandla ayisihlanu kune-testosterone ngenxa yesilinganiso se-androgenic se-500 kuya ku-500 ngokuqhathaniswa nalokho kwe-100 kuya ku-100. Okwakha ama-bodybuilders, ikakhulukazi, le yi-steroid ethandwayo ngoba nje bangashesha kangakanani ukupakisha amandla emisipha namandla. Kuyasizakala nalabo abafuna ukushisa amanoni ngokushesha kunalokho abebengakwenza ngokwemvelo.
I-3: i-Anavar (Oxandrolone) powder
INandrolone Decanoate ingelinye lamavama asetshenziswa kakhulu kuma-anabolic steroid phakathi kokuthuthukisa abasubathi. Kuyaziwa ngokuba yi-steroid enkulu enzuzisa kakhulu isizini, kepha futhi iyintandokazi emibuthanweni eminingi yabasubathi ngezinzuzo zayo zokwelapha. Ngenxa yezinzuzo zayo zokwelapha ezinkulu, i-hormone yaseNandrolone ingelinye lama-anabolic steroid azuzisa kakhulu ekusebenzeni kwezokwelapha.
I-5: I-Boldenone Undecylenate eluhlaza
I-Boldenone Undecylenate iyi-testosterone ethathwe i-anabolic androgenic steroid futhi iyindlela yokuguqulwa ye-testosterone ehlelekile. Ushintsho oluncane kakhulu esibophweni esengeziwe esengeziwe esikhungweni sekhabhoni kanye nezikhundla ezimbili. I-Undecylenate ester ivumela ukukhishwa okuphezulu kweBoldenone cishe izinsuku ezingama-3-4 emva komjovo, ngokukhipha kancane okuqhubekayo kwehormoni okufanele ikulandele cishe izinsuku ze-21.
I-Dianabol imelela enye yama-anabolic steroid abaluleke kakhulu futhi ebaluleke kunazo zonke. Ngaphandle kokungabaza, le yi-steroid yomlomo eyaziwa kakhulu eyake yafika emakethe nangelinye lama-steroid athandwa kakhulu kunoma yiluphi uhlobo. Ngenkathi cishe ihlala itholakala njengethebhulethi yomlomo, i-Dianabol ingatholakala njengesixazululo esingaxilongwa, kepha amaphilisi amele umzila wokuphatha oyinhloko.
Ngenkathi enye yama-anabolic steroid eyaziwa kakhulu, iStanozolol idume kakhulu phakathi kwabaningi ku-steroid besebenzisa inani labantu. Kungezindlela eziningi i-anabolic steroid enobumnene engasetshenziswa ngokuphepha ngabesilisa nabesifazane. Ngokubaluleke kakhulu, kubonakale kusebenza kakhulu kwimisebenzi eminingi yokuqinisa ukusebenza.
I-8: I-Hormone Evanhu Ekhulayo Yomuntu iluhlaza
Iningi labo bonke abakwa-Masteron emakethe izoba yi-Drostanolone Propionate. IDrostanolone Propionate iyi-dihydrotestosterone (DHT) ethathwe nge-anabolic steroid. Ngokukhethekile, i-Masteron yi-hormone ye-DHT eye yaguqulwa ngokuhlelekile ngokufakwa kweqembu le-methyl endaweni yokuma kwekhabhoni 2, lokhu kuvikela i-hormone ekuqhekekeni komzimba yi-3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, etholakala emgodleni wamathambo. Iphinde iyikhulise kakhulu imvelo ye-anabolic ye-hormone.
Enye yezinto ezidume kakhulu phakathi kwalabo bantu ancintisanayo noma obukayo
womzimba wokuhlobisa owengeziwe
IMethenolone Enanthate ibhekwa njengenye yama-anabolic steroid aphephe kakhulu emakethe futhi ithwala isilinganiso esihle sokuphepha ukubuyisa lesi simangalo. Eqinisweni, le steroid isetshenziswe ngempumelelo ekwelapheni izingane ezinesisindo esincane kanye nezinsana ngaphambi kwesikhathi. Kubhekiselwe ne-osteoporosis ne-sarcopenia ..
Umthombo Onokwethenjelwa wama-Anabolic Steroids Ongacatshangelwa Ngaphambi Kokuthenga
Cwaninga Izinhlobo Ezihlukahlukene Zama-Steroid
Ungathenga kalula i-steroid powder online bese uyiletha ngokungaziwa ekhaya lakho. Kodwa-ke, kufanele wenze ucwaningo oluthile ngaphambi koku-oda i-steroids powder. Okokuqala, thola ukuthi ngabe uthola i-steroid powder efanele. Uma unabangani ejimini abasebenzisa i-steroid powder, thola ukuthi iyiphi abayisebenzisayo futhi ubuze okuyiyona engcono kakhulu yabaqalayo. Ungacela nezeluleko kwabanye abakhi bomzimba ezinhlanganweni ezizotholwa online.
Ukufundwa kokubuyekezwa kwe-steroid powder ehlukahlukene ongaba nentshisekelo nakho kuyasiza. Ikakhulu, kufanele uthole ukuthi ama-steroid powder asebenza kanjani, hlobo luni lokudla nezinhlelo zokuzivocavoca ezihamba kahle nabo nemiphumela emibi engenzeka. Uma unesimo esivele sikhona, thola ukuthi kungaba yini ukwehla kokusebenzisa i-steroid powder ethile ongaba nayo ngemuva.
Khetha Umthengisi Othembekile weSteroids
E-China, kunezinkampani eziningi ezenza ama-steroid powder athengiswayo. Kodwa-ke, uma uthenga ama-steroid powder online, awusoze waqiniseka ngemvelaphi yezithasiselo. Kukhona imakethe enkulu engaphansi komhlaba yama-steroid powder emhlabeni wonke futhi amalebhu amaningi angaphansi komhlaba, ikakhulukazi aqhamuka eYurophu, angakuthumela nge-anabolic steroids powder engekho emthethweni. Ngenxa yempilo yakho, kungcono uku-oda i-steroids powder evunyiwe ezinkampanini ezaziwayo.
Sebenzisana Nathi, Esingakwenza Kungaqalwa
Imikhiqizo yethu ikhiqizwa ngaphansi kwe-cGMP futhi ikhwalithi ingalandelelwa.
Ukumsulwa Kuqinisekisiwe kungaphansi kwe-98%. COA; I-HPLC; Imibiko yokuhlola ye-HNMR inganikezwa.
Ikhono lethu lokunikezela lihle kakhulu futhi lihlela ukukhiqizwa kwesisindo njalo.
Sinesipiliyoni esicebile ekusebenzeleni izimakethe eziphezulu emhlabeni wonke.
Sebenzisana ngqo nefektri yethu, unganciphisa izindleko zakho.
Q: Ungabeka kanjani i-oda kusuka enkampanini yakho?
I-1.Ungasithumela i-oda lakho lokuthenga kuwebhusayithi yethu noma ku-imeyili yethu ([Email protected]), ikhotheshini izonikezwa uma sesitholile.
I-2.Ipayment receand parcel receiver nekheli elinikeziwe.
I-3.Izimpahla zizohanjiswa ngenombolo yokulandela umkhondo, isithombe sephakheji, inombolo yokulandelela kanye nosuku lokufika olinganiselwa.
Ama-4.Goods athola futhi anikeze imibono.
Q: Yiziphi izindlela zokukhokha inkampani yakho ezingayemukela?
A: Ukudluliselwa Kwebhange; I-Western Union; ImaliGram; I-Bitcoin
Q: Isampula Iyatholakala?
A: Yebo, Imikhiqizo eminingi ingathunyelwa njengamasampula wamahhala, kepha phezu kwakho ukhokhela izindleko zokuthumela.
Q: Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yomkhiqizo ngaphambi kokufaka ama-oda?
A: COA, HPLC, HNMR ayatholakala. Futhi amaphepha okuhlola anamalebhu wesithathu azonikezwa isikhathi nesikhathi.
Q: Ngingaqinisekisa kanjani ukuthi imali yami iphephile?
A: Imali ingabuyiswa ngaphambi kokuba izimpahla zithunyelwe.
A: Ngaphakathi kwe-1 ~ 3 izinsuku zokusebenza ngemuva kokukhokha kuqinisekisiwe. (Amaholide aseChina awafakwanga).
Q: Ngabe kukhona isaphulelo?
A: Yebo, ngobuningi obukhulu, sihlala sisekela ngamanani angcono.
Q: Ungaqinisekisa ukutholakala kokuhlinzekwa?
A: Ikhono lethu lokuhlinzeka lihle kakhulu futhi lihlela ukukhiqizwa kweningi njalo.